KEDU ESI MEE PDF FAỊLỤ SITE NA FOTO? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Kedu esi mee pdf faịlụ site na foto?
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nwere ọrụ nke ime ọtụtụ ihe oyiyi na jpg, bmp, usoro gif - otu pdf faịlụ. Ee, ichikota ihe oyiyi na pdf, anyi ga - enweta uru: o di mfe inyefe otu faịlụ na onye obula; na uzo di otua, ihe oyiyi ahu na - emechi ma were obere ohere.
E nwere ọtụtụ mmemme na netwọk maka ịgbanwere ihe oyiyi site n'otu usoro gaa na ọzọ. N'isiokwu a anyị na-atụle ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mfe iji nweta pdf faịlụ. Maka nke a, anyị nwere obere ntakịrị uru, n'ụzọ nkịtị.
XnView (jikọta usoro ihe omume: http://www.xnview.com/en/xnview/ (enwere taabụ atọ na ala, ị nwere ike ịhọrọ nsonaazụ ngosi)) - ịba uru dị mma maka nlele ihe oyiyi, na-emepe ọtụtụ narị ụdị usoro kachasị ewu ewu. Tụkwasị na nke ahụ, na setịpụ ya, e nwere nnukwu atụmatụ maka edezi ma na-agbanwe ihe oyiyi. Anyị ga-eji ohere dị otú ahụ mee ihe.
1) Meghee usoro ihe omume ahụ (site n'ụzọ, ọ na-akwado asụsụ Russian) ma gaa ngwaọrụ / multipa faịlụ.
2) Nke ọzọ ga - apụta na windo ahụ dị ka foto dị n'okpuru ebe a. Họrọ nhọrọ iji gbakwunye.
3) Họrọ ihe oyiyi achọrọ ma pịa bọtịnụ "OK".
4) Mgbe agbakwunyere foto niile, ịkwesịrị ịhọrọ nchekwa nchekwa, aha faịlụ, na usoro. E nwere ọtụtụ usoro n'usoro ihe omume ahụ: ị nwere ike ịmepụta faịlụ tiff multipage, psd (maka photoshop) na pdf anyị. Maka faịlụ pdf, họrọ ụdị usoro "Ọkpụkpọ Akụkụ" dịka dị na foto dị n'okpuru, wee pịa bọtịnụ mepụtara.
Ọ bụrụ na emezuru ihe niile n'ụzọ ziri ezi, usoro ihe omume ahụ ga-emepụta faịlụ achọrọ ngwa ngwa. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mepee ya, dịka ọmụmaatụ n'ime usoro Adobe Reader, iji jide n'aka na ihe niile na-arụ ọrụ dịka o kwesịrị.
Nke a mezue usoro nke ịmepụta pdf faịlụ site na ihe oyiyi. Ịgbanwegharị obi ụtọ!